I-Social Media iyimayini yeGolide Yokumakethwa Komshwalense | Martech Zone
NgeSonto, ngoMashi 30, 2014 NgoMsombuluko, Mashi 31, 2014 Douglas Karr
At Umhlaba Wezokumaketha Kwezenhlalo kulo nyaka, ukubuya ekutshalweni kwemali bekuyintambo evamile kuzo zonke izikhathi nezingxoxo engqungqutheleni. ILeadSift yipulatifomu enika amandla ukuthengisa kwezenhlalo ngokulalela nokuletha imikhondo engaba khona ezinkampanini. Kulesi sibonelo, i-LeadSift iqoqe imininingwane evela kuma-tweets angaphezu kwezigidi ezi-3.7 kanye nochungechunge lwezifundo zocwaningo ukukhombisa amandla wokuthengisa komphakathi ngaphakathi kwemboni yomshuwalense.
Esinye sezici ezinamandla kunazo zonke zokuxhumana nabantu uchungechunge lwamathrendi namaphethini adalwe kusuka kudatha enkulu. Konke ukuzibandakanya, wonke ama-tweets nakho konke ukuxhumana kuhlangana ukudala lokho esikubiza njengedatha enkulu. Ngokuhlaziya ngokucophelela, UkuholaSift ithole ukuthambekela emininingwaneni izinkampani zomshuwalense ezingayisebenzisa ukuze zisebenze futhi zisebenze kangcono emizamweni yazo yokumaketha nokuthengisa.
Tags: aflacallstateavivai-geicoukumaketha komshuwalenseukuphilaezweni lonkeOkuqhubekayosocial mediaipulazi lombusokucofeimpilo yelanga yezezimali